I-Villa Niccolai Yendabuko Enendawo Yokubhukuda Eduze ne-Lucca - I-Airbnb
I-Villa Niccolai Yendabuko Enendawo Yokubhukuda Eduze ne-Lucca
Castelfranco di Sotto, Tuscany, i-Italy
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Lorenzo
Qhudelana enkundleni yebhola ngezinhloso ezincane, nge-ping pong okufanele uyilandele. Hamba emasimini amakhulu aqhosha ngezihlahla zezithelo, izihlahla zomnqumo ngisho nesivini. Ngaphakathi, idizayini yendabuko ihlanganisa imishayo eveziwe kanye nomsebenzi wezitini, kanye naphansi othayela wakudala.
4.92 (izibuyekezo ezingu-25)
Thenga esitolo esikhulu esiseduze futhi uthathe idrayivu iDemo ukuze ufinyelele izindawo zokudlela eziningi, ezinezinqaba, iminyuziyamu kanye nemibukiso ongavakashela nayo. Hamba ugibele ihhashi, udlale igalofu, nebhayisikili lezintaba endaweni yangakini, futhi mhlawumbe uzame nokuhamba ngepharashuthi esikhumulweni sezindiza sase-Lucca esiseduze.